Indlu eyakhiwe emthini yaseTransylvanian kufutshane neSibiu (iibhayisekile zasimahla) - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe emthini yaseTransylvanian kufutshane neSibiu (iibhayisekile zasimahla)
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguTiberiu Mihai
I-Porumbacu treehouse yeyona ndawo ifanelekileyo yeholide, intywiliselwe kwihlathi elincinci kanye embindini wePorumbacu, ilali yeentaba eTransylvania. Imilambo emibini iwela ipropathi kwaye uya kuvuka kakhulu imini kwindawo eluhlaza nzulu. Baleka kubomi obuxakekileyo beentsuku zeveki kwaye ufumane indlela yokuphumla neyolileyo yokuphila. Ukongeza, kwiyadi yangaphambili kukho i-guesthouse yethu yaseTransylvanian apho uya kufumana ezinye iindawo zokuhlala ezimnandi: ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo, i-wifi barbecue, i-kiosk, njl.
I-treehouse inegumbi elinye lokulala (abadala aba-2 + abantwana aba-2 / abadala) kunye nebhedi yokumkanikazi kunye nesofa enwetshiweyo, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela elinye. I-terrace ibonelela ngembono entle kuzo zonke iindawo.
IPorumbacu yilali esentabeni. Incopho yeNegoiu, eyesibini kwincopho ephezulu yeCarpathians ikumgama weekhilomitha ezimbalwa. Indawo inemisebenzi emininzi onokuthi uyenze. Unokwenza i-trekking kwi-Transylvanian woods, hamba uhambo oluya e-Negoiu okanye e-Balea kwaye ufumane i-Transfagarasan entabeni indlela. Unokundwendwela iSibiu, idolophu yakudala ephakathi, i-35 km kude okanye uye e-Avrig, iikhilomitha ezi-7 kuphela, apho unokutyelela ibhotwe laseBrukenthal. I-Rasinari, ilali ye-shepard ikumgama oziikhilomitha ezingama-50. IBrasov ikumgama weekhilomitha ezili-100. Ngaphandle kwesixeko esimangalisayo, apha unokutyelela inqaba yaseBran kunye nenqaba yaseRasnov.
Esona sikhululo sikufutshane - iSibiu - ikumgama weekhilomitha ezingama-40 kuphela, isikhululo seenqwelomoya saseCluj sikumgama weekhilomitha ezingama-200, ngelixa isikhululo seenqwelomoya saseBucharest sikumgama oziikhilomitha ezingama-250.
Umbuki zindwendwe ngu- Tiberiu Mihai
Indlu yethu yeendwendwe iPorumbacu 295 ikwiyadi engaphambili.